Sida loo kaabta Android Qalabka Macdan Faylal ay kaga imaanayo fudayd?
Marar badan ah, waxaa sidaas dhici kartaa in laga yaabo in aad si qalad ah lumin xogta. Xaaladaha noocaas ah, waa joogitaanka gurmad Ufbaa ah oo kaa caawin kara inaad soo celin xogta aad ku waayey waqti lahayn. Marka aad isticmaasho Tababaraha gurmad android, waxaad la kulmi karaan dhibaatooyin ah oo yar, sababtoo ah file gurmad ah ma akhrin karo. Marka taa loo caqabadda this, aan si toos ah aad u soo celin kartaa files gurmad. Si kastaba ha ahaatee, ma aha wax aan macquul aheyn. Iyadoo la isticmaalayo smart ee software, aad awoodo si fudud gurmad qalab android ay soo saarida qaab gurmad ah oo soo celin aad content si fudud aad.
Kaabta Maamulaha Android kaabta
Tababare Android kaabta waa aalad kaasi oo loo adeegsaday aawadood hayaan saarida laakiin socodka hawsha oo idil waa mid aad u adag. The file gurmad u baahan yahay in la abuuri isticmaalaya amarka ADB ah. Marka file gurmad la cadaadiyo, riixo ee ay leedahay in la sameeyo iyadoo la isticmaalayo maktabadda riixo zlib ah. Marka sirta ah waxaa galay inta ay socoto riixo ah, waxa ay horseedi doonaan in Windows XP gurmad file.
In si ay u abuuraan nusqado on qalab aad, aad u baahan tahay si ay u leedahay android 4.0+ version. First of dhan, waxaad u baahan tahay si ay awood hab debugging USB. Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso file XML muujin android iyo aad leedahay si ay u dejiyaan android: sifo allowback si run ah.
Waxaa jira tallaabooyin taxane ah oo loo baahan yahay in lagu sameeyo sida aad u yeelan doonaan in ay soo galaan amarrada.
Tag ka android gurmad xogta madfac oo ay maamulaan amarka 'pm liiska baakadaha'. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ka hesho liis dhamaystiran oo baakadaha ku rakibay qalab aad.
Waxaa jira amarka gaar ah aawadood oo ah taageero ilaa faylka. Wixii taageero ilaa xogta Whatsapp, waxaad isticmaali kartaa amarka soo socda.
Adb gurmad -f com.whatsapp.ab -noapk com. Whatsapp
Waxaad heli doontaa degdeg ah badanu aad u baahan tahay in guji 'gurmad xogta aan
Tani waa sida si ay u abuuraan gurmad ah. Haddii ay horeba u muuqataa in ay ka kaaftoomi aad u badan, aadan ku faraxsan yahay in la ogaado in geeddi-socodka lagu soo saarida iyo soo celinta gurmad ah waa ka sii adag doonaa.
Saaro gurmad ah
First of dhan, faylka gurmad u baahan in la beddelay archive TAR ah kuwii madax 24 byte ah.
Marka madax ayaa laga xayuubiyay, xogta zlib cayriin markaas u baahan yahay hogaanka la decompressed isticmaalaya openss1
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah amarrada kala duwan oo u baahan in la galay iyo haddii, aad leedahay aqoon sireed dhamaystiran, waxaa hubaal ah ma aha talaabooyin fudud si ay u qabtaan.
Guud ahaan, geeddi-socodka oo dhan u muuqataa in ay adag badan iyo tani waa sababta ay dadka ugu muuqdaan in ay ka fogaadaan isticmaalaya Tababaraha xogta android waayo fulinaya ama soo celinta hayaan. Waxaan la hadli doonaa jidka kale ah kaas oo wax badan ka sahlan oo dhakhso badan oo dhan, dhibaatooyinkii farsamo sans sidoo.
Kaabta iyo Soo Celinta la mid click
Wondershare MobileTrans waa mid ka mid ah software ugu caansan oo wax ku ool ah oo loo isticmaali karaa aawadood taageerto kor u ka kooban oo si fudud u soo celinta aad.
Kaabta iyo Soo Celinta qalabka Android la HAL click!
1-guji si aad xiriirada gurmad, SMS, barnaamijyadooda, audio, video, sawiro, abuse wac, jadwalka taariikhda.
Marka taa loo waxyaabahan, waxaa xaqiiqo ah waa mid ka mid ah doorasho la door bidaayo ka mid ah dadka isticmaala. Ha noo eegno talaabooyinka inay raacaan ilaa taageero iyo soo celinta xog Android.
Sida loo kaabta Data la Wondershare MobileTrans ?
Si gurmad content ku saabsan telefoonka, raac tallaabo kuwaas.
Download iyo abuurtaan Mobile Trans aad kombuutarka.
Connect aad telefoon si aad PC.
In screen guriga codsiga ah, guji "Back Up Your Phone ' sida ay u furi doonaa guddi gurmad ah.
Waxaad ka heli doontaa liiska sheegaysa oo dhan ka kooban, taas oo aad rabtid in aad gurmad.
Fiiri kuwa content oo aad rabto in aad dib ka dibna ku dhuftay on 'Start Copy' .
Mobile Trans bilaabi doonaa koobi si aad u computer faylasha oo la soo doortay.
Sida loo soo celiya ee kaabta?
Marka aad sameeyey gurmad ah, waxaad u isticmaali kartaa wakhti kasta aawadood oo ah soo celinta faylasha aad iyo iyaga sanaanayaa dib telefoonka.
Burcad Mobile Trans app aad kombuutarka iyo xirmaan telefoonka isticmaalaya cable USB ah.
Tag menu guriga oo doortay "Soo Celinta ka hayaan ' doorasho.
Waxaad ka heli doontaa liiska dropdown ah oo bixin doonaa qaababka kala duwan ee aad gurmad ah waxay qaadan kartaa.
Dooro file gurmad oo aad dooneyso in aad soo celiso.
Riix 'Start Copy'.
Faylasha ayaa loo wareejin doonaa telefoonka ka PC.
Raac tallaabooyinka kuwan oo aad noqon doontaan in la soo celiyo files aad gurmad waqti awoodaan.
> Resource > Android > Sida loo Android Qalabka kaabta iyo ka kaabta fudayd Waraaqda Files?